LALAM-PIRENENA FAHA-44 : Mizotra araka ny tokony ho izy ny fanatanterahana ny asa
Mizotra araka ny toromarika nampitain’ny Filoham-pirenena Andry Rajoelina, ny fanamboarana ny lalam-pirenena faha44 miainga eo Moramanga hatrany Ambatondrazaka. 25 novembre 2019
Fantatra fa efa tonga ao Ambatondrazaka amin’izao fotoana izao ny orinasa hanamboatra ity lalana ity. Tsy niandry ela fa avy hatrany dia nanomboka ny asa izy ireo taorian’ny fametrahana ny foibeny tao Morarano Gara ao Moramanga. Tsiahivina fa ny orinasa CGC, orinasa manana ny maha izy azy avy any Sina no hiantoka manontolo ny fanamboarana azy ity.
Nisy ny fihaonana teo amin’ny governoran’ny Faritra Alaotra Mangoro sy ny lehiben’ny orinasa izay hanatanteraka ny asa. Nivoitra nandritra ny fihaonan’ny roa tonta ny tsy maintsy hanajana ny lalana mahakasika ny kalitao sy ny fenitra takiana amin’ny fanamboaran-dalana.
Mizara telo mazava tsara ny fanamboarana ity lalana ity raha ny fanazavan’ny tompon’andraikitra. Eo ny fanaovana ny fampitovian-tantana ny lalana sy fanalehibeazana azy, arahin’ny fandrakofana vato kely ary farany ny fandrakofana tara. Velom-pisaorana ny fitondram-panjakana ny mponina any an-toerana satria tsy mba nisy nijery izany nandritra ny taona maro fa nataon’ny sasany fanaovana fampielezan-kevitra fotsiny ihany. Rehefa lany anefa izy ireo dia mihantona eo ny lalana fa tsy namboarina akory.
Efa velirano nataon’ny Filoham-pirenena, Andry Rajoelina ny fanamboarana azy ity ka tsy maintsy vitaina, hoy ny Minisitry ny Fanajariana ny tany raha nitsidika tany an-toerana herinandro vitsy lasa izay. Araka ny fantatra, haharitra 18 volana ny asa. Atao tara avokoa ny lalana rehetra amin’izao fanavaozana azy izao raha toa ka tsy nisy afa-tsy rarivato sy lalan-tany izany teo aloha. Ny lalana mampitohy an’i Vohidiala sy Marovoay kosa dia hanomboka ny taona 2020.